Mampiavaka ny karazana hazo isan-karazany
Misy karazan-kazo maro karazana, izay hazo voafantina, ho an'ny tanjona iray na hafa? Andao hojerentsika akaiky kokoa ny mahatsara sy maharatsy ny ala samihafa.
Ireto voankazo voasary ireto dia manana tantara sy fampiasa ary fitsaboana ary fihinanana sakafo be dia be. Andao hofantarina bebe kokoa momba ny mpanjakan'ny voankazo voasary - voasary!
Kisoa miaraka amina prun ao anaty vilany mangatsiaka - fomba fahandro
Raha te-hisakafo hariva tsy mahazatra ianao, fa te hanangona fotoana ary mahandro amin'ny vilany tsy dia mihinan-kanina - henan-kisoa miaraka amin'ny prun, dia izay ilainao! Tsotra, mahafa-po, matsiro!
Ahoana ny fomba hisorohana ny lesoka mampiaraka hita miharihary, inona ny mahazatra ary inona no tokony hialana? Mamaky ary "mitaingina soavaly" foana
Tsy azo zaraina roa ny iray - ahoana raha raiki-pitia amin'ny namana iray ianao
Tsy zavatra mora ihany ny fiainana, ary ny fitiavana koa, fa ahoana kosa raha mahita lehilahy iray ianao sy ny namanao? Ahoana no hirosoana? Inona no safidiana - fisakaizana sa ady ho an'ny lehilahy? Hiezaka hahatakatra an'ity olana ity izahay!
Izay te hankalaza ny Paska amin'ny fomba matsiro sy miovaova, esory ny fomba fahandro - matsiro, tsy mahazatra - tsy hadino!
Tantaram-pitiavana Office - lalàna fiarovana 7
Ny ankabeazan'ny fiainantsika dia lany amin'ny asa, ary tsy afaka manafatra ny fonao ianao, tsia, tsia, fa lehilahy mahery iray no ho tonga. Mahafinaritra ny tantaram-pitiavana ao amin'ny birao, saingy misy fitsipika vitsivitsy harahina!
Paka: fisafidianana ireo zavatra inoana taloha sy famantarana famantarana ny toetr'andro
Amin'izao fotoana izao, Paska be tsy miasa no maoderina - natiora, barbecue. Ahoana no nankalazan'ny razambentsika ny Paka? Inona avy ireo fomban-drazana sy famantarana hita tao anatin'ity fialantsasatra ity?
Fahano ny proteininao!
Tahaka ny olombelona, ​​ny squirrels dia sahirana tamin'ny areti-mandringana - nihena ny isan'ny sakafo, nisy fiantraikany tamin'ny mponina tao amin'ny faritra ambanivohitra! Ampio ho velona ireo pussies malalantsika!
Ireo okroshka misy lafiny maro
Efa zatra an'izany isika rehetra hatramin'ny fahazaza, okroshka matsiro, mahasalama ary manome hery. Andao hojerentsika ny toy izany - avy taiza izy? Ahoana no mahasoa azy? Resipeo ho an'ny okroshka mahazatra sy tany am-boalohany!
Resipeo kebab kisoa ao an-trano
Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara fomba fahandro amin'ny fanaovana barbecue ao an-trano aho. Inona no hena raisina, ahoana ny mariny sy mahandro. Holazaiko aminao ihany koa ny antony itiavako ny biriky tsotra toy ny barbecue vy, sy kitay toy ny arina novidina.
Ho an'ny vanim-potoanan'ny kebab: moka lola amin'ny saribao - fomba fahandro
Araka io fomba fahandro io, ny lula malefaka sy be ranony amin'ny saribao dia azo omanina tsy avy amin'ny pike fotsiny. Ny trondro renirano hafa dia mety ihany koa: perch, roach lehibe, karpa. Ny tena zava-dehibe dia ny fillet vaovao, ny orinasa tsara ary ny toe-po mahafinaritra!
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,650.